Top toban Injiil Artists
Music waa hadiyadda ugu weyn iyo farxad in Ilaah siiyey binu-aadmiga. Waxaa xasiliyaa ka agitations nafta iyo soobixi mid dunida cusub oo raaxo galay inkastoo duufaanada ee nolosha. Si kastaba ha ahaatee, ma dhan music gaari karo sida saamayn + Liverpool sida qaar ka mid noqon karaan. Music Injiil sare dhigeysa qaybaha waxaa lagu yaqaan in ay dab ka qalbiga nin laayaan oo ilmada ka indhihiisu waxay qof dumar ah oo soo. Tan iyo markii waagu beryay iyo tan Masiixiga badan songs injiilka lagu curiyey fanaaniin kala duwan. Halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya toban fanaaniinta injiilka.
Kirk Franklin waxa uu ku dhashay on Jan 26, 1970 Texas USA iyo waxa ku amaanay sida mid ka mid ah hogaanka American Injiil muusikaystayaasha. Wuxuu bartay music ee Dean Dugsiga Sare ee Oscar Wyatt iyo dib aasaasay koox injiil, ayaa Hearts-hoosaysiiya, diiwaan uu ka kooban yahay ugu horeysay oo isaga helay dareenka ah halyeeyada music injiilka iyo qaar ka mid ah caan ah in industry music injiilka. Waxa uu helay abaalmarino badan ay ku jiraan Grammys Todoba, Saddex iyo toban GMA Dove Awards iyo Shan iyo toban xiddig Awards. Waxa uu si fiican u yaqaan la Hits soo socda:
Bal qiyaas i
Duufaanka hadda waa mid.
My nolosha waa in aad gacmahaaga.
Michael W Smith waxa uu ku dhashay on October 7, 1957 ee West Virginia USA iyo waxa la qiimeeyo ka mid ah fanaaniinta injiilka American ugu sareysa isagoo guulo badan oo ku riyaaqay saaxadda Injiil. Waxa uu music xirfadiisa bilaabay 1981-dii, 1991 by uu ka iibiyey in ka badan 18 milyan oo albums. Artist ayaa ku guuleystay abaalmarinta Grammy 3, 40 abaalmarinta Dove iyo ASCAP isaga gudoonsiiyay "Golden Fiiro 'abaalmarinta guusha waqtiga nolosha. Waxa uu si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Indhaha u fur qalbigayga
Iskusoo wada duuboo
Qalbiga kuwa cibaadada
Halkan waxaan ahay inaan caabudo.
Don Moen waa An American artist injiilka, Xisbi, wadaad iyo soo saare. Waxa uu ku dhashay on June 29, 1950 Minneapolis, Minnesota USA. Isagu waa muusikiiste nool wasaaradaha Terry Law. Waxa uu ka kooban yahay music iib ah tirada guud ee ka badan shan milyan oo unug. Waxa uu si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Ilaah ka dhigi doonaa waddo
Anigu waxaan ka gabyi doonaa
Cece Winams waa heesaa injiilka Maraykan ah oo ku dhashay on October 8th, 1964 in Michigan, USA Waxay ayaa ku guuleystay abaalmarinta badan oo ay ka mid yihiin toban Awards Grammy iyo Todoba xiddig Awards. Iyadu waa heesaa caan ah oo lagu iibiyey in ka badan 12 milyan oo diiwaanka adduunka oo dhan iyo sidoo kale aqoonsan yahay mid ka mid ah bestselling artist injiilka dumar ah ee waqtiga oo dhan. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Ruuxa Quduuska ahu soo meeshan ka buuxin doonaan.
Close in aad
Waxaan ka jeclaan helay
Ciise aad u qurux badan.
Farshaxankii ka mid ah 'oo gabayaa ahaa injiilka ugu wanaagsan ee lab ah labaatankii sano ee la soo dhaafay.' Isaga oo heeso iyo heeso jir noqon doono this. Waxa uu ku dhashay on November 9, 1959 in Copiague, New York. Artist ayaa ku guuleystay abaalmarinta Grammy saddex, 10 abaalmarinta xiddig, 2 Abaalmarinta BET, 2 abaalmarinta tareen naf iyo mid abaalmarinta NAACP image. Waxa uu si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Great waa naxariis
Waxaan idiin ku yeedhi aamin
Sandy Patty waxa uu ku dhashay on July 12, 1956 oo ka soo jeedaa Oklahoma City ee Waxay USA waa biyaaniiste, heesaa iyo qoraaga. Sandy ayaa waxaa ku soo barbaaray qoys oo muusikiiste ah iyo in ay sida ay horumariyo mustaqbalkiisa iyada gabyaya. Her mustaqbalkiisa sii koray markii uu ku guuleystay labada GMA Dove Awards, ayaa sii waday in ay ballaariso iyo hadda waxaa ka mid ah qaybaha sida qaab riwaayad pop dunida oo dhan. Waxay soo saaray dhowr ah oo albums oo si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Waa Sidee haybad magacaaga
In uu joogitaanka
Fred Hammond waxa uu ku dhashay on December 27, 1960 in Detroit, Michigan USA uu yahay muusikiiste injiilka ugu sareysa qiimeeyo ah ayaa si firfircoon uga labadaba sida xubin ka mid ah kooxda injiilka fulinteeda iyo sida artist Solo ah. Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Dove ee 1992, 1998, 1999 iyo 2000, iyo sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta xiddig ee 2001 iyo 2005. Waxa uu si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Marka ruuxa Rabbiga
Sayidow, sida waan ku jeclahay
Song A Xoog.
Yalonda Adams waa American ah ay soo jeedo iyo waxa uu ku dhashay on August 27, 1961 Houston, Texas ee dalka Mareykanka. Qaybaha music Her kooban ee Injiilka, R & B oo music naf. Farshaxankii waa ciidankii oo gabayaa ahaa, soo saare Record, Atariishada iyo raadiyaha. Her music sii baahaya iyo iibiyey ku dhawaad ​​in ka badan siddeed milyan oo albums mid caalami ah. Waxay si fiican u yaqaan la hits injiilka soo socda:
Dagaalkuna waa mid Eebayaal ah
In dhexdeeda oo dhan oo ka mid ah.
Farshaxankii ayaa muujisay qaab ciyaareed aad u fiican in industry injiilka. Kala duwanaanshaha ayaa ah codkiisa oo go'an tahay in ay sayidkii ayaa arkay inuu sii daayo albums oo music wanaagsan. David waxa uu ku dhashay on October 21, 1969 tiro .Waxaa ee albums Christian ayaa la sii daayay farshanka iyo sidoo kale kasoo muuqday fannaaniin kale shaqeeyaan. Isagu waa fanaan injiilka go'an oo si fiican u yaqaan la hits soo socda:
Rabbiga ammaantiisu ha sii degi
Badbaadiye u naxariistaha
Waxa uu nool yahay.
Quduuska ahow Night
Kim Burrell waa ku cusub suuqa isagoo ku biiray sanadkii la soo 1989.However; iyadu ka mid ah fanaaniinta ugu sareysa injiilka waa, iyada codkooda saameynta badan ee ku sifayn ku mahad. Farshaxankii ayaa saftay MTV ee nus-saac gaar ah 'ka Church ee shaxda. Her saameyn music helay oo caan ah iyo iyada album "Love The" ahayd tirada 5 khariirada ee 2011. Waxay si fiican u yaqaan la hits soo socda:
In ka badan oo kale mar
Waxaan idiin la imid ka sii badan waxaan siin.
Top 10 Password Qab qabashada Tools
Top 13 Apps fariin qoraal ugu wanaagsan ee Android Devices
Top 20 ciyaaryahan Jabbuuti oo u Windows / Mac / macruufka / android
Qof kasta oo u eegidda Video Converter oo lagu bedelan karo
Ugu wanaagsan 2 Music Dukaamada si aad u soo iibsato music for Android
10 Isticmaalada Great ee telefoonada Old iyo murriyado
Samee dhaceen Flash Screensaver la Kan sameeyey Screensaver
> Resource > Top List > Artists Top Toban Injiil